'Qabeenyaa uumamaa keenya fayyadamuuf heeyyama eenyutuu nu hinbarbaachisu' - BBC News Afaan Oromoo
'Qabeenyaa uumamaa keenya fayyadamuuf heeyyama eenyutuu nu hinbarbaachisu'
Image copyright Ministry of Foreign Affairs
Itoophiyaan qabeenyaa uumamaa qabduutti fayyadamuuf heeyyama eenyutuu argachuun ishee hinbarbaachisu, jedhaniiru dubbii himaana Ministeera Dhimma alaa Itoophiyaa.
Dubbi himichi Obbo Mallas Aalam, dhimma yeroo ilaalchisuu ibsa gaazexessitoota Kemisa taasisaniin, odeefannoofi yaadni midiyaaleefi qondaaltoonni Masirii kennaa jiranis karaa kamiin iyyuu adeemsa ijaarsa hidha guddichaa irratti dhiibbaa akka hin taasifne dubbataniiru.
Guyyootaan duras midiyaaleen biyyattii, ijaarsi hidhaa Itoophiyaan gaggeessaa jirtu gahee bishaan Masirii waan hirisuuf Pirezidaantii Masirii Abdil Fattaa Al-Siisiin Itoophiyaaf akkeekachisa cimaa dabarsaniiru jechuu gabaasanii turan.
Pirezidaantichis akeekachisa kan kennan waligahii Kaayirootti biyyoonni sadan; Masirii, Itoophiyaa fi Suudaan irratti hirmaachuun qorannoo miidhaa hidhiichi qaqabsiisu danda'urratti mari'achuun rgaasisuu dadhabu isaanitiin akka ta'e dubbataniiru.
Obbo Mallas ammoo mariin 17ffaan biyyoota sadeen waliigaltee malee kan bittinaa'eef, Masiriin waliigalteewwan bara koloonii ammas qaama marichaa naaf haa ta'u jechuu isheetiin jedhaniiru.
Al- Siisiin ammoo sirna heebbaa buufata qurxummii biyyatti irratti Sanbata darbe argamuun ''gahee bishaan Masirii eenyumtuu tuquu hindanda'u. Fedhii guddina obbooleeyan keenya Itoophiyaanootaas ni deegarra. Bishaan dhimma nageenya biyyaalessaa biyya keenyaati. Nageenya biyyaalessaa keenya eegsisuun immoo nu hidhibu. Dhuma,'' jechuusaanii Al-arabiyaan Masirii gabaaseera.
Obboo Mallas Itoophiyaa ijaarsa hidhaa saffisiisuun maddiittis, hajii walta'insaa Masiriifi Suudaan waliin taasiftu cimsitee itti fufti jedhaniiru.
Ijjannoon midiyaalee fi dhaabbilee motummaa Masirii muraasni gaggeessaa jiranis, kan danbiiwwan waliigalteen walfaalleessuudha jedhaniiru.